Xisbiga Sheekh Shariif oo dacwad ka dhan ah XF u gudibiyey maxkamadda sare - Awdinle Online
Xisbiga Sheekh Shariif oo dacwad ka dhan ah XF u gudibiyey maxkamadda sare
Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd, Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta shaaciyey inuu dacwad ka dhan ah laanta fulinta ay u gudniyeen Maxkamadda sare ee dalka.
Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka mid ah golaha aqalka sare, sidoo kalena xubin ka ah xisbiga Himilo Qaran oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dacwaddaasi ay la xariirto xayiraadii dhowaan la saaray Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ay doonayaan in lagu kala boxo cadaaladda, si xal looga gaaro khilaafka ka dhashay kiiskaasi.
Dowladda federaalka ayaa dhowana is hortaag ku sameysay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, xilli uu ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, si uu uga qeyb galo caleema saarka Axmed Madoobe.
Tallaabadan ayaa waxaa si isku mid ah u cambaareeyey dhammaan hoggaanka xisbiyada mucaaradka, iyaga oo dowladda dhexe ku eedeeyey inay jabineyso sharcida u yaalla dalka.
Previous articleCiidamada Djibouti ee Amisom oo dagaal kula wareegay xarumaha maamulka degmada Jalalaqsi
Next articleSawiro: Wasiirka amniga Jubbaland oo Maanta Maxkamad khasab ah la horgeeyay